Baolina kitra - Tompondakan’i Afrika :: Voatazon’ny Fosa Juniors ady sahala ny TP Mazembe • AoRaha
Baolina kitra – Tompondakan’i Afrika Voatazon’ny Fosa Juniors ady sahala ny TP Mazembe
Vokatra mampisalasala samy aotra sy aotra, izay sady tsy ratsy nefa tsy tsara, no azon’ny klioba tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra, Fosa Juniors, omaly, tany Mahajanga. Vitan’ity solontena Malagasy ity ny nitazona ny haratony tsy hikobana nanoloana ny tompondaka Kongoley, Tout Puissant Mazembe tao amin’ny kianja Rabemananjara, saingy tsy nahatafiditra baolina ihany koa ny solontena malagasy.
Mbola ho sarotsarotra ny miandry ny Fosa Juniors amin’ny lalao miverina any RD Congo amin’ny dingana faharoan’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika isan-tarika.
Niaro tena hatramin’ny farany ireo mpilalaon’i Boeny nanoloana an’ity klioba efa tompondakan’i Afrika in-dimy ity. Nanana fanafihana sy valim-panafihana tokony nahatafidirany baolina ihany ny Fosa Juniors, nefa mbola mitoetra ho lesoka foana ny lafiny famonoam-baolina.
Na izany aza, nambaran’ny mpanazatra, Rasoanaivo Titi, fa: « azo atao tsara, tahaka ny fihaonana tamin’ny Pamplemousses SC tany Maorisy ny hampiditra baolina any Congo amin’ny lalao miverina », na dia teo aza ny fahadisoam-panantenana tamin’ny lalao omaly.
Vokatra tsy nampoizina
Tsy nampoizina izao vokatra izao ho an’ny TP Mazembe. « Tsy afa-po tamin’ny zava-bitan’ny mpilalaonay aho. Hahavita tsara noho ireny no anton-dianay teto. Tsy nahagaga kosa anefa ny vokatra satria ekipa tsara ny Fosa juniors », hoy ny fanazavan’i Pamphile Mihayo, mpanazatra ny tompondaka Kôngôley
Mafy ny fifandonana. Porofon’izany ny nahazahoan’ireo mpilalaon’ny ekipa avy any Congo karatra mavo telo. Karatra mavo tokana kosa ho an’ny Malagasy. Nanao ny ainy tsy ho zavatra ny Fosa Juniors na teo aza ny tombony ara-batana nananan’ny TP Mazembe. « Azo atao tsara ny mifanandrina amin’ny ekipa goavana toa an’io klioba nihaona tamintsika io. Mbola maro ny lesoka mila harenina amin’ny lalao miverina », hoy indray ny mpanazatra malagasy.
Manana roa herinandro ny Fosa Juniors hanitsiana an’izay tsy nety tamin’iny lalao voalohany tamin’ny TP Mazembe iny. Mila mailo hatrany ny tompondaka malagasy noho ny mety hanovan’ny mpifanandrina mpilalao rehefa hilalao any amin’ny taniny. Saika mpila ravinahitra avokoa mantsy ny ankamaroan’ireo mpilalao mandrafitra ny tompondaka Kôngôley. « Maro tamin’ireo mpilalao no tsy nanome ny zato isan-jato avy any aminy. Hojerena, araka izany, ny mety hanovana ny mpilalao », araka ny fanazavan’itsy mpanazatra kôngôley itsy ihany.
Kitra – “Amboaran’ny CAF” :: Lavo tany an-tanin’olona ny CNAPS Sport
Handball – Analamanga :: Mizotra tsy misy mahasakana ny dian’ny Cosfa 1